Isikhokelo sakho sokuqonda iintlobo zamaPencilisi eziGraphite
Ukucacisa iikhowudi zePencil Inkomo
Ipensela ipensela, kunjalo? Abaculi baziva ngokukhawuleza ukuba le ntetho ayinyani kwaye kukho iintlobo zeepencilisi ze-graphite zokuzikhetha. Ngokuqhelekileyo, uya kufana nokudweba iipencilisi ezimakwe nge-H, i-B, okanye zombini. Ezi zifinyezo zisetyenziselwa ukubonisa ubunzima (H) kunye nomnyama (B) wegrafite yepensile.
I-Scding Scale ye-Graphite Pencil
Abenzi beepencilisi basebenzisa izifinyezo ukubonisa uhlobo lwegraphite elisetyenziswe nganye ipensile.
Nangona kungekho migaqo ethile yale nkqubo yokubamba kwaye iyakwazi ukuhluka ngohlobo, bayabhalisela umgaqo-siseko.
Ngokulula, iipensele ziphawulwe nge-H ne-B: i-H ithetha nzima kwaye iB ithetha umnyama. Ezi ncwadi zingasetyenziselwa zodwa okanye zidibanisane kunye, njenge-pencil HB. I-HB ilingana ne penisi ye-Amanani aseMelika oyisebenzisayo iminyaka. I penisi yeNombolo 1 ifana ne pensile B.
Amapensele amaninzi anenombolo edibene nayo. Oku kubonisa ubukhulu bomelele okanye bumnyama i-graphite ivelisa. Iipencilisi zifakwe kwi-9H ukuya ku-2H, H, F, HB, B, kunye no-2B ukuya ku-9xxB. Bonke abavelisi beepencil abaza kuvelisa ngalinye ibanga.
Ukucacisa iCodephis Pencil Code
Kulungile ukwazi ngezinto osebenzisa zona, kodwa ungayisebenzisa njani le nkcazo kwimidwebo yakho? Umculi ngamnye kunye neepensile kuya kuba yinto eyahlukileyo, kodwa kukho imigaqo ejwayelekile ongayisebenzisa njengesikhokelo.
Iipenisile ze-H zinzima kwaye zihamba ngegraphite engaphantsi kwiphepha. Oku kuthetha ukuba zikhanya.
Iipenisile ze-B zikhawuleza kwaye zishiya ngaphezulu kwegraphite ephepheni, oku kuthetha ukuba zibomnyama.
F ithetha iGolide Point. Le nto ipencilisi enzima kwaye kulula ukuhlala ibukhali, kodwa ngokubanzi kunzima kakhulu ukudweba jikelele.
Okungaphezulu kweH, kunzima ipencilisi. Oku kuthetha ukuba i-4H ilukhuni kune-2H kwaye ke, i-4H iphinda ilula. I-9H iqhelekileyo ipenciliti elula kunazo zonke.
Ipensela ye-HB inomgangatho ophakathi. Ukudweba, kusengumsebenzi onzima.
I-B ngaphezulu, i-pencil ipencil. Oku kuthetha ukuba i-5B ilula kune-2B kunye ne-5B iza kuvelisa uphawu olumnyama. I-7B yincinci kakhulu kwaye imnyama kakhulu phakathi kweepensele eziqhelekileyo, nangona ungafumana i-8B okanye ipensela ye-9xxB.
Gxotha Iifowuni Zakho
Indlela efanelekileyo yokuqonda kakuhle nantoni na ipensile ekufuneka inike ngayo kukuba wenze i-swatch. Oku kukuvumela ukuba ubone indlela elula, emnyama, epholileyo, kwaye enzima ipenseli nganye isethi yakho. Ukuba ugcina yakho i-swatch nawe ngenkathi udweba, ungayisebenzisa njengokwalathisi okanye ukukopela iphepha xa ukhetha ukuba ipencil iyakuthabatha.
Ukwenza iphepha lokubamba ipensela kwakungeke kube lula. Yibambe nje isiqwenga sephepha lakho lokuthanda.
Hlela ipensele yakho kwi-hardest (H's) kwi-B's).
Ngomnye, bhala i-patch encane ye-shading kwicala elilodwa kunye neepensile nganye. Yenza njalo kwi-grid uze ubhawule umthunzi ngamnye ngebanga lepensile ehambelana nayo xa uhamba.
Njengoko ufaka ipensela entsha kwiqoqo lakho, yongeza le fayili yakho.
Ukuba, ngezinye iindawo, ufumanisa ukuba iphepha lakho lokukopela alinakulungiswa ngenxa yokuba ungeze okanye ususa iipensela, yenza nje iphepha elitsha lokuhlaziywa.
Ngoku, ngexesha elilandelayo kufuneka ubenze u-shading obunzulu, uyazi ukuba yiphi ipenseli eyona mnyama. Ngaba kufuneka usebenzise amanqaku amancinci? Tsamba nje ipenseli epheleleyo ye-H yomsebenzi. Lo msebenzi olula, onemizuzu emihlanu ungathatha uqikelelo ekudwebeni.
Liliphi iphepheni endiyisebenzisayo yokuGrafisha iPencilite Pencil?
Ngaphambi kokuba Uthenge izixhobo zokuLondoloza ipensela
Iipencilisi eziphambili zePrayleli Kwabaqali kunye nabaSebenzi
Ukukhethwa kunye nokudweba: Iintlobo zamaPenciloni okuSebenzisiweyo
Iipencilisi eziPhambili eziPhezulu zoBugcisa boBugcisa
Imifanekiso ka-2007 Ford F-150 Pickup Trucks
Indlela yokudlala i-Pull-Off
IiHares, iRbbits, nePikas
UMarbury v. Madison
Iingxoxo zokuqala - Ukunika nokucela ulwazi loBuntu
I-Pastels yamafutha kunye neentsimbi ze-oyile: Iinkcukacha kunye nokusetyenziswa
Amadoda aseMelika aseMerika aBantu aBawo kunye nabaseTyhini be-20 leminyaka
I-Pre-Apartheid Era Imithetho: Abahlali (okanye abamnyama) uMthetho woMhlaba uNombolo 27 ka-1913
40 Iingoma eziphambili ze-Hip-Hop Workout Songs
Isikhokelo sokuthenga uMlilo oQinisekile
NgoMeyi 5, 1941: I-Ethiopia ibuyisela ukuzimela kwayo
Ukunciphisa Inkcazo kwiKhemistry